2. Arammana Paccaya | Dhamma Training Center
Jul 21 st, 2020
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၂- အာရမ္မဏပစ္စယော Arammanha Paccayo (Object support condition)PDF File
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၂- အာရမ္မဏပစ္စယော Arammanha Paccayo (Object support condition) ...
Apr 14 th, 2020
၂ – အာရမ္မဏပစ္စယော Ārammaṇa Paccayo (Object support condition) PDF file
၂ – အာရမ္မဏပစ္စယော Ārammaṇa Paccayo (Object support condition) PDF file ၂ – အာရမ္မဏပစ္စယော Ārammaṇa Paccayo (Object support condition) PDF file...
Mar6th, 2020
၁။ ကုသလတ္တိက ၇။ ပဥှာဝါရ ၁။ ပစ္စယာနုလောမံ ၁။ ၀ိဘင်္ဂ၀ါရ ၂ – အာရမ္မဏပစ္စယော Ārammaṇa Paccayo (Object support condition) Ārammaṇapaccayo Paccayaniddeso 2. Ārammaṇapaccayoti – rūpāyatanaṃ...
၂ – အာရမ္မဏပစ္စယော Ārammaṇa Paccayo (Object support condition) (2 of 8)
Ārammaṇa Paccayo (Object support condition) ‘Ārammaṇa’ has two meanings. The first meaning isaplace where people take delight, you delight...
Ārammaṇapaccayo Pañhāvāro Kusalo dhammo kusalassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo. dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati, pubbe suciṇṇāni pacca- vekkhati, jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati,...
၂ – အာရမ္မဏပစ္စယော Ārammaṇa Paccayo (Object support condition) (4 of 8)
၂ – အာရမ္မဏပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိ ၄၀၄။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ အာရမ္မဏပစ္စယေန ပစ္စယော။ ဒါနံ ဒတွာ သီလံ သမာဒိယိတွာ ဥပေါသထကမ္မံ ကတွာ တံ ပစ္စဝေက္ခတိ၊ ပုဗ္ဗေ သုစိဏ္ဏာနိ ပစ္စဝေက္ခတိ၊ ဈာနာ ၀ုဋ္ဌဟိတွာ...
၂ – အာရမ္မဏပစ္စယော Ārammaṇa Paccayo (Object support condition) (5 of 8)
၂-အာရမ္မဏပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိနှင့် မြန်မာ zawgyi ၄၀၄။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ အာရမ္မဏပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု-၁) ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား အာရမ္မဏပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ ဒါနံ ဒတွာ သီလံ သမာဒိယိတွာ ဥပေါသထကမ္မံ ကတွာ...
၂ – အာရမ္မဏပစ္စယော Ārammaṇa Paccayo (Object support condition) (6 of 8)
၂။ အာရမ္မဏပစ္စယော zawgyi ဘ၀နှင့် ပဋ္ဌာန်းသင်ခန်းစာ အာရုံခြောက်ပါး အာရမ္မဏကို တောင်ဝှေးကြိုးတန်းနှင့် ပမာပြုကြပါသည်။ စိတ် စေတသိက်တို့၏ အာရုံကို တောင်ဝှေး နှင့်တူပြီး၊ ရုပ်၏အာရုံကို ကြိုးတန်းနှင့်တူကြောင်း ရှေးဆရာမြတ်တို့က ပြဆိုတော်မူကြသည်။ အာရမ္မဏပစ္စည်း၏ သင်္ချာ ...
၂ – အာရမ္မဏပစ္စယော Ārammaṇa Paccayo (Object support condition) (7 of 8)
အဿာဒေတိ၊ အဘိနန္ဒတိ zawgyi ရာဂနှင့်ယှဉ်ပါက အနုစား သာယာနှစ်သက်မှုမျှသာ ဖြစ်သေးသဖြင့် အဿာဒေတိ အဘိနန္ဒတိကို မတားဆီးနိုင်မှသာ “တံ အာရဗ္ဘ ရာဂေါ ဥပ္ပဇ္ဇတိ” ရာဂအထိ ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းကို ပဋ္ဌာန်းသိပ္ပံဆရာတော်ကြီးက အောက်ပါဥပမာဖြင့် ပြဆိုတော်မူပါသည်။ “မီးပြင်းတိုက်ထားသည့် သံဒယ်အိုးအလွတ်ထဲကို...
၂ – အာရမ္မဏပစ္စယော Ārammaṇa Paccayo (Object support condition) (8 of 8)
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ၀ိပဿနာဉာဏ် zawgyi ရူပါရုံအဆင်းနှင့် မြင်သိစိတ် စက္ခုဝိညာဏ်တို့တွင် အဆင်းက အကြောင်းတရား၊ မြင်သိစိတ် စက္ခု ၀ိညာဏ်က အကျိုးတရား ဖြစ်ပါသည်။ ရူပါရုံအဆင်းမရှိဘဲ မြင်သိစိတ် မဖြစ်နိုင်ဟု သိရှိနားလည် သဘောပေါက် လာခြင်းသည် ပစ္စယပရိဂ္ဂဟဉာဏ်မည်၏။ မြင်သိစိတ်က...